फेसबुकबाट पुस्तक बिमोचन - Dr. Nawa Raj Subba
2011-09-10 Dr. Nawa Raj Comments0Comment
सूचना प्रविधिको विकाससँगै पुस्तक विमोचन गर्ने नयाँ शैलीको पनि विस्तार भएको छ । यसै सिलसिलामा डा. कृष्णप्रसाद दाहालबाट लिखित तथा सम्पादित “अध्ययनको आलोकमा बीच बाटोमा ब्यूँझेर” फेसबुकबाट विमोचित भएको छ । इन्टरनेटमा सर्वाधिक लोकप्रिय सञ्जाल फेसबुकबाट उक्त पुस्तकलाई साहित्यकार स्रष्टा नवराज सुब्बाले विमोचन गर्नुभयो ।
विमोचन गरेपछि उनले आफ्नो प्रतिक्रियामा— “सूचना प्रविधिको उचित प्रयोग गरेमा मानिसको अमूल्य समय र स्रोत बचाउन सकिन्छ । सभा, समारोह र सम्मेलन गरेर साहित्यिक गतिविधि गर्ने परम्परागत सोंचलाई फराकिलो बनाउनु समयको माग हो ।” भनेर बताउनु भयो ।
समालोचना संग्रहमा कवि नवराज सुब्बाको “बीच बाटोमा ब्यूँझेर” कवितासङ्ग्रहमाथि डा. कृष्णप्रसाद दाहाल, डा. बद्रीविशाल पोखरेल, लीला लुईटेल, देवी पन्थी, सुरेश प्राञ्जलीका समालोचना र बैरागी काइँला, डा. तुलसी भट्टराई, डा. बेञ्जु शर्मा, दधिराज सुबेदी, देवी पन्थी, बद्री पलिखे, शैलेन्द्र साकार, ध्रुव मधिकर्मी, हरिप्रसाद बराल, जगत प्रेक्षित, गांधीराज काफ्ले, हिंडपाली साइँलो, रश्मिशेखर, खगेन्द्र पन्धाक लिम्बू, माया पकुवालका समालोचना, समीक्षा तथा टिप्पणी संग्रहित छन् ।
कृतिभित्रका रचना नेपाली र अंग्रेजी भाषामा भएको र प्रवासमा बसेका नेपालीहरूका मन्तव्य, समीक्षा तथा टिप्पणीहरूलाई समेत कृतिमा समावेश गरिएको छ । उक्त कृति www.nrsubba.com.np ले प्रकाशित गरेको हो ।
पुस्तक डाउनलोड गर्न सकिन्छ थिच्नुहोस